Archdiocese of Mandalay blog: June 2013
ဖါသာရ် ဂျိုးဇက်ဖိုး (၁၈၅၅-၁၉၁၈)
Fr.Joseph Foure (Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ် ဂျိုးဇက်ဖိုးသည် (၁၈၇၅) ခုတွင် ပြင်သစ်ပြည်မှ ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ပထမဆုံး ဧရာဝတီ ဖလိုတီလာ သင်္ဘောဖြင့် မန္တလေးသို့ လာခဲ့သည် အထက်မြန်မာနိုင်ငံ ပထမဆုံး ဆရာတော် ဘူးဒွန်းက ဖါသာရ်ဖိုးအား နဘက်ရွာ၏ ၀ါရင့် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဗိယက်ထံ မြန်မာစာပေ လေ့လာ ၁
သင်ယူရန် စေလွှတ်လိုက်သည်။ (၁၈၇၅) ခု ရဟန်းတော်များ ၀တ်စောင့် အပြီး ချောင်းဦးရွာ ဘာသာဝင်အုပ်စုကို တာဝန်ယူ ကြည့်ရူ ရသည်။ (၁၈၈၀) တွင် မန္တလေးမြို့ စိန်ပီတာ ကာသီဒရယ်ကို တာဝန်ယူ ကြည့်ရူရသည်။ ထိုအချိန်တွင် (Procurator Of the Mission) တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရသည်။ မင်းညီ မင်းသားနှင့် ၀န်ကြီးများ၏ သားများကိုလည်း ပြင်သစ် ဘာသာစကား သင်ကြား ပေးရသည်။ ဘုရင့်သားများနှင့် မူးမတ်သားများသည် ပြင်သစ် ဘာသာစကား သင်ကြားခြင်းကို ငြီးငွေ့လာသဖြင့် ကျောင်းပိတ်လိုက်ရသည်။ ဖါသာရ်ဖိုးသည် (၁၈၈၂)ခုတွင် ရေဦး ခရိုင် ချမ်းသာရွာသို့ ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်။ ချမ်းသာရွာ ဘာသာဝင်များက လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုကြသည်။ ထိုစဉ်က ရေဦးမြို့သည် ခရိုင်မြို့ ဖြစ်သည်။ နောင်တွင် ရွှေဘိုခရိုင် အတွင်း သွတ်သွင်းခံရသည်။ ဖါသာရ်ဖိုးသည် ချမ်းသာရွာတွင် (၃)နှစ်ခန့် သီတင်းသုံးခဲ့သည်။ (၁၈၈၅-၁၈၈၆) ခုနှစ်များ၌ ဗြိတိသျှတို့ အထက် မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်သည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်သည့် ဒေသများနှင့် ဝေးလံသော ဒေသများတွင် ဓားပြများ သောင်းကျန်း ကြသည်။ ဖါသာရ်ဖိုးမှာ သောင်းကျန်းသူများ၏ ဘေးမှလွတ်ရာ လွတ်ကြောင်း ချမ်းသာရွာ ဘုရားကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို စွန့်ခွာ၍ ထွက်ပြေးရသည်။ ဘုရားကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးနေကျောင်းတို့မှာ သောင်းကျန်းသူများ၏ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခြင်း ခံရသည်။ ဖါသာရ်ဖိုးမှာ ဘေးမသီ ရန်မခဘဲ မန္တလေးသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ ဖါသာရ်ဖိုးသည် (၁၈၈၆)တွင် မိမိ ကြည့်ရူခဲ့သော ချမ်းသာရွာ ဘုရားကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးနေကျောင်း မီးလောင်သွားသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် စိတ်ထိခိုက်ပြီး ကျန်းမာရေး ချိုယွင်းလာသဖြင့် ဟောင်ကောင်နိုင်ငံ ဘီသာနီမြို့ အနီးရှိ အနားယူစခန်းသို့ (၃)နှစ် သွားရောက် အနားယူခဲ့သည်။ (၁၈၈၉)ခုတွင် ပြန်လည် ကျန်းမာလာသဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန် ဟောင်ကောင်မှ ပြန်လာခဲ့သည်။ ဖါသာရ်ဖိုးသည် (၁၈၉၀) မှ (၁၉၀၁) ခုနှစ်အထိ ချမ်းသာရွာကို (၁၀)နှစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
ဖါသာရ်ဖိုးသည် (၁၈၉၄) ခုနှစ်တွင် ကိုးကျောင်းတကာ ဦးမြတ်ကျော်၏ မြေး မန္တလေးမြို့နေ ဦးသက်နှံ + ဒေါ်ငွေပွင့်တို့၏ လှူဒါန်းငွေဖြင့် မီးလောင်သွားသော ကျောင်းဟောင်းအတိုင်း (၇)ခန်း အပြင် အလွန်မြင့်မားသော ခေါင်းလောင်းစင်ထိပ်မှ ခရစ္စတူးတိုင်ကို မုိင်ပေါင်းများစွာ ဝေးသည့်နေရာမှပင် မြင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် ချမ်းသာရွာ ဘာသာဝင်များ ဂုဏ်ယူ ၀င့်ကြွားစရာ ဖြစ်သည်။ ချမ်းသာရွာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကက်သလစ် အသင်းတော်၏ ရောင်ခြည်တော် ထွန်းလင်း တောက်ပစွာ ထင်ဟပ်စေသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းကိုလည်း ကြီးမားစွာ (၂)ထပ် ဆောက်လုပ်လျက် အောက်ထပ်ကို ရွာသူ ရွာသားများအတွက် စည်းဝေး ခန်းမဆောင် အဖြစ် ထားရှိသည်။ ၂
ချမ်းသာရွာ ဘုရားကျောင်းကျောက်စာ (၁၈၉၄)
၀ရိယနှင့် လုလ္လခေတ်ဘံ ကောင်းကျိုးကြံ၍ အတုလထာဝရ ဘုရားသားတော် ကိန်းအောင်းတော်မူရာ မှင်ကာအပျောက် ကျောက်သံဘန်းငွေ အမွှန်းရွှေတို့ဖြင့် ပြီးသော ဘုရားကျောင်းကြီးကို အသီးသီး ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းသောကြောင့်(၉) ကျောင်းတကာ မည်သညာ ထင်ပေါ် ဦးမြတ်ကျော် ကျောင်းတကာကြီး၏ ချစ်မညီးသား ဦးပိုးပိုးက ဆင့်လျား မွေးမြင်သော သား ကိုသက်နှံခင်ပွန်း မငွေပွင့်တို့သည် မိမိတို့ ဥာဏ်သား စွမ်းပကား အလျှောက်မဟုတ် မဆုတ်မနှစ် စီစစ် ကြိုးကုတ်ကား ထုတ်လုပ်ဆောင် ရှာဖွေသဖြင့် မြင့်မြတ်တော်မူလှသော မြတ်စွာဘုရား တန်ခိုးကျေးဇူးတော်နှင့် အထိုက်အလျောက်ရရှိ သနားတော်မြတ်ခံရသော ဥစ္စာ ပစ္စည်းများကို အခြားသော လောကီအသုံးတို့၌ အမှတ်ထင် ပေါ်လွင် သုံးစွဲချေသော် မလျှော်မသင့်ဟု နှလုံးသွင်းပြီးလျှင် ဘုရားသခင်နာမတော် ဘုန်းအာနုဘော်တော်ကို ထင်ပေါ်ချီးမွမ်း ထောပနာပြုခြင်းငှာ၎င်း၊ မိမိတို့တွင်ရှင်သော်သေသော်အမျက်တော်နှင့် ကင်းလွတ်ပါမည့် မဟာဂရုဏာ ကျေးဇူးတော်မြတ်ကို ခံရပါစေသော သဘောကို အာရုန်ပြု၍ ယ္ခုဤကျောင်းကို မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၂၅၅) တပိုတွဲလဆန်း (၁၄)ရက်နေ့ ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၈၉၄)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၈)ရက်နေ့တွင် တုမရ မြတ်စွာဘုရားအား ဆောက်လုပ်ပြီးမြောက် လှူဒါန်းပူဇော်ပါသည်။ ကျောင်းတကာ ကျောင်းအမတို့ ပန်လျှောက်ေ မေတ္တာအမြဲ ပို့ကြပါ။
ဖါသာရ်ဖိုးသည် မိမိ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ချမ်းသာရွာ အတွက် စာသင်ကျောင်း တစ်ဆောင် ဆောက်လုပ် ပေးလိုသည့် ဆန္ဒအလျောက် မိမိကိုယ်ပိုင်ငွေနှင့် လှူဒါန်းကြသည့် ငွေများ စုပေါင်းလိုက်ရာ ငွေကျပ်တစ်သောင်းခန့် ရရှိသည်။ ထိုအခါ ဖါသာရ်ဖိုးသည် ဆောက်လုပ်လိုသည့် ကျောင်းပုံစံကို ရေးဆွဲလျက် ကျောင်းဆောက်ရန် ရင်းနှီး မတည်ငွေကိုပါ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ပညာရေးဌာနသို့ တင်ပြခဲ့သည်။ စာသင်ကျောင်းဆောက်ရာ၌ ကုန်ကျမည့် စရိတ်ငွေ တစ်ဝက်ကို နိုင်ငံတော် အစိုးရက ကုန်ကျခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြား ချက်ဖြင့် ချမ်းသာရွာ၌ နှစ်ထပ် စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်လိုက်သည်။ ဖါသာရ်ဖိုးသည် (၁၈၉၄)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၈)ရက်နေ့တွင် ဘုရားကျောင်း သာဓုခေါ် ကောင်းကြီးပေးပွဲ ကျင်းပသည်။
ဖါသာရ်ဖိုးသည် (၁၉၀၁) ခုတွင် ကျန်းမာရေး ချိုယွင်းလာသဖြင့် ဆရာတော်ကြီး ကာဒိုး၏ ခွင့်ပြုချက်အရ မန္တလေးမြို့ စိန်ဂျွန်း ကိုယ်ရေဖျား ရောဂါသည်များ စောင့်ရှောက်သောကျောင်း၊ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ်ဝင်းဂဲ၏ လက်ထောက်အဖြစ် အနားယူလိုက်သည်။ (၁၉၁၈)ခု စက်တင်ဘာလ (၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ စိန်ဂျွန်းကျောင်း၌ ပျံလွန်တော်မူသည်။ ၃
၁။ The Voice, Dec,1918, PP.357-360
၂။ The Voice,Dec,1918, PP.357-360
၃။ The Voice,Dec,1918,PP.357-360
ဖါသာရ် အာချီလေ ဒူးဟန်း (၁၈၅၀-၁၉၀၈)
Fr.Achille Duhand (Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ် ဒူးဟန်းသည် (၁၈၇၅)တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ (Procurator of the Mission)နှင့် ဆရာတော် ဆီမွန်၏ (Provicar) အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။ ချောင်းဦးနှင့် ဗန်းမော်ကို တာဝန်ယူ ကြည့်ရူရသည်။ ၁ (၁၈၈၇)တွင် ချောင်းဦးမှ ပြောင်းရွှေ့ရသည်။ ဖါသာရ် ဒုးဟန်း လက်ထက်ချောင်းဦး၌ ဘာသာဝင် အိမ်ခြေ (၃၅) အိမ် ရှိသည်။ ၂
မန္တကက်သလစ် မြောက်ပိုင်းသာသနာ ဒုတိယမြောက် ဆရာတော်ကြီး အေဆီမွန်က မန္တလေး၊ ၈၂ လမ်း၊ ၂၅ x ၂၆ ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေ အရှေ့ရပ်ရှိ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ် ဘုရားကျောင်းကြီးကို (၁၈၈၈) ခု ဇွန်လ (၂၄)ရက်တွင် အုတ်မြစ်ချ တည်ဆောက်ရာ ဖါသာရ် ဒူးဟန်းနှင့် ပြင်သစ်အင်ဂျင်နီယာ မစ္စတာဒဗလျူဗလင်းတို့က ကြီးကြပ် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ (၁၈၉၀) ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့တွင် ဘိသိတ်ပွဲ ကျင်းပသည်။ ၃ ဖါသာရ် ဒူးဟန်းသည် (၁၉၀၈)ခု စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်၌ ပျံတော်မူသည်။
၁။ The Voice,April,1926,PP.104-107
၂။ The Voice,Oct,1924,PP.234-235
၃။ The Little Messenger, 1950,Editor and publisher, Brother Hubert F.S.C.Printed at Rangoon, Gazeette Ltd.
ဖါသာရ် လောရန်း (၁၈၅၁-၁၉၃၀)
Fr.F Laurent (Paris Forign Mission Society)
ဖါသာရ် လောရန်းသည် (၁၈၅၁)ခု ဇန်န၀ါရီလ (၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၈၇၆) ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် သာသနာပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၈၈၄-ခုတွင် ကလေးမြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ချင်းတို့၏ ရိုးသားမှုကို တစေ့တစောင်း လေ့လာ နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၈၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆရာတော် စီိမွန်က ဖါသာရ် ဗက်စထရေတန်နှင့် မြောက်ပိုင်း ချင်းတောင်သို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ တနှစ်ကြာသော အခါ ချင်းတောင်ကြီးကို အဝေးမှ မျှော်ကြည့် ခဲ့ရသည်။ နောက် တနှစ်တွင် ဖါသာရ်ဂျားနှင့် အတူ ပခုက္ကူမှ တဆင့် ချင်းတောင် သွားခဲ့သည်။ ချင်းတောင်ခြေရောက်၍ ချင်းစကား စတင် သင်ခဲ့သည်။ ၁၈၉၁ -ခုတွင် ဖါသာရ်ဂျား ဖါသာရ်အကာဒီယမ်တို့နှင့်ဟားခါးကို သွားကြသည်။ ဖါသာရ် လောရန်း မကျန်းမာ၍ ဂန့်ဂေါတွင် နေရစ်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ် လောရန်းသည် (၁၉၁၄) ခုနှစ် အထိ မုံလှရွာ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူ ခဲ့ရသည်။ ချောင်းရိုး ဘာသာဝင်များကိုလည်း ကြည့်ရူ ရသည်။ ချောင်းရိုး ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူစဉ် ဘုရားကျောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ (၁၈၉၈) ဖေဖေါ်ဝါရီ (၉)ရက်နေ့တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။ ဆရာတော်ကြီး ကာဒိုး ကောင်းကြီးပေး ရေစက်ချသည်။ ဖါသာရ် လောရန်းသည် (၁၉၁၄) ခု မှ (၁၉၂၉)ခုနှစ် အထိ နဘက်ရွာ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူ ရသည်။ (၁၉၃၀) ခု စက်တင်ဘာ (၇) ရက်နေ့တွင် နဘက်၌ ပျံတော်မူသည်။
သစ္စာ ဓမ္မ၀ရိယနှင့် လုလ္လဆော်နိုး ကောင်းမြတ်ရာရာ အမျိုးမျိုးတွင် အကျိုးထူး ခံစားစေရန် စီမံအစ ဥာဏ ဣန္ဓီတု မရှိသော အစိန္ဓေရ သုံးလု ထွဋ်တင် အနန္တ ရွှေဥာဏ်တော်ရှင် ထာဝရဘုရားသခင်သည် ဣသရေလမျိုး ဘာဝအား ဘုရားတမန် ကိုးကွယ်ရန်ဟု ပိတ်မှန်တွင်ခေါ် မြတ်စံတော်ကို ဆောက်လုပ်တည်ရန် ဣသရေလနိုင်ငံကို စီမံ ဥက္ကဌအစိုးရသော ရဟန္တာတွင် မိုးဇယ်ရှင်အား ဇောံအလျားနှင့် အခြားအသွယ်များ ဗျာဒိတ်ဝယ် ထုံးတန်းဆောက်လုပ်ရန် နည်းလမ်းကို ဓမ္မဟောင်း ရွှေစာ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း သမ္မာနှင့် ကျောင်းတကာ ကျောင်းအမတို့၏ စိတ်နှလုံး ရွှင်ပြုံး ပီတိ ဂွမ်းဆီထိပမာ ညီညာမယွင်း နှလုံးသွင်းပြီးလျှင် မိမိတို့ပိုင် လက်ကိုင်ဥစ္စာ ရှိသမျှ အရာရာတို့သည် ကိုးစားရာမရ အနိစ္စနှင့် အနတ္တစစ်အမှန်ဖြစ်သည့် ပြင်ဓမ္မသစ်ကျမ်း ရွှေနှုတ်ထွက်ပြန်တမ်းကို အခန်းခွဲယူရန် သူမကင်း နှလုံးသွင်း၍ ဘေးရှင်းလွတ်ရာ ကျမ်းအလာဖြင့် သဒ္ဓါကြည်ယုံ ရွှေပြည်ဘုံကို အာရုံစုိုက်မြိုက် ဘဏ္ဍာတိုက်အသွင် နှလုံး စွဲတင်၍ ထိုပြင်စိတ်ထား တရားပစ္ဆာ လွန်ကြူးရာနှိုက်နေ့မှာ အန္တိရောက်တုံ ဘိက ဒုစရိုက် ညစ်ကြေး အပြစ်ဘေးကို ခွင့်ပေးပါမည့် အကြောင်းနှင့် စုတောင်းဝန္ဒနာ ပန္နအလား သဒ္ဓါပွါး၍ အများဘာသာတူ ကြည်ဖြူရိုကျိုး ရှိခိုးပူဇော်ရန် ဗိမာရန်ခေါ် ထိုက်ကျောင်းတော်ကို ရဟန်းတော် မထေသင်ညီမည်မှန်း ဘာသာလောရန်း၏ ပုံစံ နိသယျခံယူ ကြပြီးလျှင် ဘုရား မယ်တော်ထင်ပေါ် ကြေငြာမာရီယားဟု သညာတံဆိပ် ဘွဲ့တော်နှိပ်ပြီးလျှင် ရွှေဘိုမြို့ ခရိုင် ဆိုင်ရာ တန်ဇယ်အုပ်စုနယ်ပါ ချောင်းရိုးဂါမ အဘမည်သွင်း ဆရာရင်း၏ သားသမက်ဆက်လက် မသွေမန်းမြို့နေဟု သရေမညိုး ဆရာဘိုးနှင့်အမျိုးဇာဂီ သစ္စာချည်သည့်အမည် ဖေါ်ထုတ် ကျောင်းအမမယ်တုတ်နှင့်သရုပ်မည်တွင် ဆရာသင်၏ သားမြလျှင် ပုတ္တဌာနမည်ထူး ရေဦးမြို့နေ အသွေထင်ထပ် မတ်ဆရာရည်အမည် ထပ်ညွှန်း ခင်းပွန်းတူလှ ကျောင်းအမ မယ်ရုပ်တို့က မဏိတ စေတနာ သဒ္ဒါတရား တိုးပွါးသည့် အလျှောက် သ္ခင်ဘုရားအား ဆောက်တည် လှူဒါန်း ပူဇော်သည်။ ကျောင်းတော်သည် အပြီးသို့ရောက်၍ သာသနာတော် သက္ကရာဇ် (၁၈၉၈) ခု ဖေဖွရီလ (၉)ရက်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် (၁၂၅၉)ခု တပိုတွဲလပြည့်ကျော်(၄)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် (၉)နာရီအချိန်တွင် အသင်းတော်ချုပ် ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်ဘုရားနှင့် အများသင်္ဃာ အရိယာတို့ မင်္ဂလာ ကောင်းကြီးပေးပြီး ထိုခါ သိုးခြံပါ တပည့်အပေါင်းတို့က မင်္ဂလာအောင် စုတောင်း၍ ကောင်းကြီး ကျွေးကျော် သာဓု အနုမောဒနာခေါ် ကြပါသည်။ ၁
ချောင်းရိုးရွာ ဘုရားကျောင်း ခေါင်းလောင်းစာ
သက္ကရာဇ် ၁၁၃၈-ခု ကဆုမ်လ္ဆန်း (၁)ရက်နေ့ သင်းဘောပြည် ဘင်းကလားက ရောက်လာည်။ ခေါင်းလောင်းကို အန်ထော်နီ ရွှေထွန် မာရိယာရှင်ပုံ သ္မီး၂ မောင်နှံ၂ ယောက်က ၀ယ်ယူ၍ ချောင်းဥ ဆပေါက်ရွာ ဘရင်ဂျီကျောင်းမှာ လှူဒါန်း ကောင်းမှု ပြုခဲ့သည်။ ကောင်းမူသော အကျိုးကို ဆင်းရဲနှင့် ငရဲကင်း၍ နိပ္ပံမက် မရွပ်မလွဲ အမြဲဧကံ အမှန်ရလိုပါ၏ ချောင်းရိုးရွာ ခေါင်းလောင်းလှူသူတို့ကို မေတ္တာပို့ကြပါ။ ၂
ချောင်းရိုးရွာသည် ဘုရင်ဂျီ ရွာဟောင်း (၁၆) ရွာထဲမှ တရွာ အပါအ၀င် ဖြစ်သည့်အတိုင်း ဘုရင်ဂျီရွာ ဘာသာထွန်းကားသော ရွာတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သေးငယ်သော ရွာဖြစ်ရကား ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးဟူ၍ အမြဲ မရှိခဲ့ပေ။ ချမ်းသာရွာနှင့် မုံလှရွာတို့မှ ဘုန်းကြီးများသာ မကြာခဏ လာရောက် ကြည့်ရူရသည်။ ဖါသာရ် ပိုလီညာနီသည် သွားရောက် ကြည့်ရူရသည်။ သို့သော် တိုင်းရင်းသား ဆရာတဦးရှိ၍ ပွဲတော်ရက်များတွင် လူစု၍ ဘုရားဝတ်ပြုခြင်း၊ တရားဓမ္မ ဟောပြောခြင်းများ ပြုလုပ်သည်။ ကျပ် (၅၀၀)တန် သစ်သား ဘုရားကျောင်းကို (၁၈၃၄) ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ရာ ဆရာတော်ကြီး ကာအိုက ကျပ်ငွေ (၈၀) လှူဒါန်းသည်။ ချမ်းသာရွာ၊ ချောင်းရိုး၊ မုံလှနှင့် အမရပူရ ဘာသာဝင်များက ကျပ်လေးရာ နှစ်ဆယ် (၄၂၀) ထည့်ဝင်ကြသည်။ ချောင်းရိုးရှိ ဘာသာဝင်များသည် ဘာသာတရားနှင့် မယိမ်းမယိုင် စွဲမြဲစွာရှိနေခြင်းမှာ ကျောင်းတကာ ဦးညှင်း၏ သြဇာအာဏာ စူးရှမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားကျောင်း အပြင် ဘုန်းကြီးနေရန် ကျောင်းကို ဖါသာရ် ဓါမာတို၏ နောက်လိုက် တပည့်ဖြစ်သူ ဆေးဆရာ၊ ဆရာစောရွှေက ဘုန်းကြီးနေရန် ကျပ် (၅၀၀) ငါးရာတန် အဆောက်အဦးကို ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းသည်။ ၃
၁။ ဦးမောင်မောင်တင်၊ မဟာဝိဇ္ဇာ၊ အတွေးအမြင် စာစဉ် (၄၅)၊ ၁၉၈၉၊ ဇူလိုင်လ၊ စာမျက်နှာ ၂၃-၂၆
၂။ ဦးမောင်မောင်တင်၊ မဟာဝိဇ္ဇာ၊ အတွေးအမြင် စာစဉ် (၄၅)၊ ၁၉၈၉၊ ဇူလိုင်လ၊ စာမျက်နှာ ၂၃-၂၆
၃။ ခင်ထွေးရီ၊ ခရစ်ယာန်သမိုင်း၊ စာမျက်နှာ ၄၀
ဖါသာရ် စီမွန် (၁၈၅၅-၁၈၉၃)
Fr.P.Simon(Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ် စီိမွန်သည် (၁၈၅၅) ခု မတ်လ (၂) ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၈၇၈) ခု တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ၁ မန္တလေးမြို့တွင် တရုတ် အမျိုးသားများကို ကြည့်ရူခဲ့သည်။ (၁၈၈၈) ခုနှစ်တွင် အနားယူသွားသော ဆရာတော် ဘူးရ်ဒွန်းကို ဆက်ခံသော ဆရာတော်အဖြစ် ရွေးကောက်ခြင်း ခံရသည်။ ၂
မန္တလေးမြို့၊ ၈၂လမ်း၊ ၂၅x၂၆ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေရပ်၊ (ယခင်ခေါ် ဘုရင်ဂျီတန်း)ရှိ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီးကို မန္တလေး ကက်သလစ်သာသနာ (၀ါ) မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကက်သလစ် သာသနာ၏ ဒုတိယမြောက် ဆရာတော်ကြီး ဆီမွန်က သက္ကရာဇ် (၁၈၈၈) ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၄) ရက်တွင် အုတ်မြစ် ချခဲ့သည်။ ၄င်း ကျောင်းတော်ကြီး ဆောက်လုပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ် အားလုံးကို ကျောင်းတကာဟု ထင်ရှား ကျော်ဇောခဲ့သူ တိုင်းရင်းသား ဘာသာဝင် ဦးမြတ်ကျော်၏ သား ပေါလူး ဦးဖိုးနှင့် ဒေါ်မယ်ဒလီနားတို့က လှူဒါန်း ခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သဖြင့် စင်္ကာပူမြို့တွင် အနားယူနေသော မြောက်ပိုင်း ကက်သလစ် သာသနာ ပထမ ဆရာတော်ကြီး ဘူးရ်ဒွန်း ကိုယ်တိုင် ပြန်လည် ကြွရောက်လာ၍ သက္ကရာဇ် (၁၈၉၀) ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင် ကြီးကျယ် ခန်းနားစွာ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ် ကျောင်းတော်ကြီးကို ဘိသိတ် သွန်းလောင်း၍ ဖွင့်လှစ် ပေးခဲ့သည်။ ၄င်း ကျောင်းတော်ကြီး လုံးပတ် အလွန်ကြီးမားသည့် ကျွန်းတိုင်ကြီးများဖြင့် ဆောက်လုပ်လျက် ကနုတ်ပန်းများ ဖေါ်ပြီး ရွှေချ ထားပါသည်။ ဘုရားရှင်၏ ဗိမာန်တော်ကိုလည်း ကျွန်းသားများတွင် ကနုတ်ပန်းများဖြင့် လှပစွာ ထုလုပ်လျက် ရွှေချထားသည်မှာ လွန်စွာ တင့်တယ်လှပါသည်။ ဘုရားဖူးများ၏ စိတ်တွင် လွန်စွာ ပင် ကြည်နူးလျက် ကြည်ညို ဖူးမြော်၍ မ၀နိုင်အောင်ပင်ဖြစ်သည်။
ထို ကျောင်းတော်ကြီးကို ဖါသာရ် ဒူးဟန်းနှင့် ပြင်သစ် အင်္ဂျင်နီယာ မစ္စတာ ဒဗလျူဘလင်းတို့က ကြီးကြပ် ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုလှပ ကြီးကျယ် ခန်းနားသော ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ် ကျောင်းတော်ကြီးသည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း (၁၉၄၂) ခုနှစ် ဧပြီလ (၃) ရက် သောကြာနေ့ကြီးတွင် ဂျပန်၏ ဗုံးဒဏ်ဖြင့် မီးလောင် ပျက်စီးရသည်။ လက်ရှိ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ် ကျောင်းကြီးကို သက္ကရာဇ် (၁၉၄၈) ခုတွင် အသစ် ပြန်လည် တည်ဆောက်၍ (၁၉၄၉) ခုနှစ် ၀တ်ပြု ကိုးကွယ်နိုင်ရန် စီစဉ်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီး ဖါးလီးယေးက ခရစ္စမတ်အကြို ညတွင် တရားဦးဟော ခဲ့ပါသည်။ ၄င်း ကာသီဒရယ် ကျောင်းတော်ကြီးကို ဘုန်းတော်ကြီး ဂျေဦးဝင်းနှင့် အင်ဂျင်နီယာ ဒီရက်နန်းတို့က ကြီးကြပ် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ၃
ဆရာတော်ကြီး ဆီမွန် လက်ထက် (၁၈၉၀) ပြည့်နှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ တရုတ်တန်း ရပ်ကွက်တွင် ပျဉ်များ ၀ါးများဖြင့် ပထမ ရဟန်း ဖြစ်သင်ကျောင်းကို ဆောက်လုပ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းကျောင်းကို ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ်ကော့က အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသား (၂၀) ခန့် ရှိသည်။ (၁၈၉၂) ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ကြီး မီးလောင်ရာ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းလည်း ပြာပုံ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကျောင်းသားများလည်း မိမိတို မိဖရပ်ထံ ပြန်ကြရသည်။ ၄
ဆရာတော်ကြီးသည် ရှေ့တိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်ရန် အကြံအစည် များစွာ ရှိသော်လည်း (၁၈၉၃) ခုနှစ် သက်တော် (၃၈)နှစ်တွင် ပျံလွန်တော်မူသည်။ ၅
၂။ ကက်သလစ်ရာဇ၀င်၊စာမျက်နှာ ၃၅၀
၃။ The Little Messenger, 1950.Editor and Publisher-Brother Hubert F.S.C.Printed at Rangoon, Gazeette Ltd.
၄။ ရဟန်းဖြစ်သင် စိန်ရတု မဂ္ဂဇင်း - စာမျက်နှာ ၃၅
၅။ ကက်သလစ်ရာဇ၀င် - စာမျက်နှာ ၃၅၀
ဖါသာရ် အုစ် (၁၈၆၀-၁၉၀၅)
Fr.A.Usse(Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ်အုစ်သည် (၁၈၆၀) ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွါးခဲ့သည်။ (၁၈၈၄) ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ၁ (၁၈၉၄) ခုနှစ်တွင် ဆရာတော်ကြီး ဆီမွန်ကို ဆက်ခံသော ဆရာတော်အဖြစ် ရွှေးကောက် တင်မြောက်ခြင်း ခံရသည်။ ကိုယ်တော်၏ ပထမ စတင်ဆောင်ရွက်ချက်မှာ မန္တလေးမြို့တွင် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ၂
(၁၈၉၆) ခုတွင် ဒေလာဆာ ဘရာသာရ်များကို မန္တလေးသို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ (၁၈၉၇) တွင် ဘရာသာရ် (၅)ပါးနှင့် စိန်ပီတာ အထက်တန်းကျောင်း စတင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသား (၈၀) ရှိသည်။ ၃ ဆရာတော်အုစ်သည် ပြင်သစ်ပြည်သို့ ပြန်သွားရာ ရောဂါ စွဲကပ်သဖြင့် (၆)နှစ် ကြာသောအခါ ၄င်းပြည်မှာပင် သက္ကရာဇ် (၁၉၀၅) ခု ဧပြီလ (၂) ရက်နေ့၌ ပျံတော်မူသည်။ ၄
၂။ ကက်သလစ်ရာဇ၀င်-စာမျက်နှာ ၃၅၀
၃။ Mandalay District Gazetter, Vol(A)P.177
၄။ ကက်သလစ်ရာဇ၀င်-စာမျက်နှာ ၃၅၀
ဖါသာရ် ဂျီးရိုး (၁၈၆၀-၁၉၁၁)
Fr.Michael Giraud(Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ် ဂျီရိုးသည် (၁၈၆၀)ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။
(၁၈၈၆) ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ (၁၈၈၇) ခုနှစ်မှ (၁၉၀၆) ခုထိ ချောင်းဦး ဘာသာဝင်များ ကြည့်ရူ ရသည်။ ဤဘုန်းတော်ကြီး လက်ထက်တွင် ချောင်းဦး၌ ဘာသာဝင် အိမ်ခြေ (၅၀)ထိ တိုးတက် လာခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးသည် (၁၉၁၁) မတ်လ (၂၆) ရက်နေ့တွင် မန္တလေး၌ ပျံတော်မူသည်။ ၁
ဖါသာရ်ဂျီရိုးသည် ချမ်းသာရွာ ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ်ဖိုး နိုင်ငံခြားသွားရောက် အနားယူနေစဉ် (၁၈၉၀)
ခုတွင် ချမ်းသာရွာ၌ ဘုန်းတော်ကြီးနေရန် သစ်သားကျောင်း တဆောင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ၂
၁။ The Voice, oct,1924,PP.234-235
Fr. Herr (Paris Foreingn Mission Souciety)
ဖါသာရ် ဟဲသည် (၁၈၆၃) ခု မတ်လ (၆) ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၈၈၈) ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၁
(၁၈၉၂) လောက်က စပြီး ရွှေဘိုနယ်အုပ် ဘုန်းကြီးအဖြစ်နှင့် နှစ်လေးဆယ်လောက် သာသနာပြုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ရွှေဘိုနယ် ရွာငယ်ကလေးများစွာတို့မှ လူများကို ကက်သလစ် ဘာသာသို့ ကူးပြောင်း စေခဲ့သည်။ ဖါသာရ်ဟဲသည် မယ်တော်ကုန်း(ကံကြီးတော)တွင် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တစ်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ပြီး၊ လူဒယ်သခင်မဘွဲ့ အမည်ဖြင့် (၁၉၂၅) ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် ကျောင်းသာဓုခေါ်ပွဲ ကျင်းပသည်။ ဆရာတော်ကြီး ဖူးလ်ကီးယေး ကိုယ်တိုင် ဘုရားကျောင်း ကောင်းကြီးပေးသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး (၈)ပါး တက်ရောက်သည်။ ဖါသာရ်ဟဲနှင့် ဖါသာရ်တော်ဘိယတို့သည် မယ်တော်ကုန်း ဘုရားကျောင်း မဆောက်မီ (၂၅)နှစ် အတွင်း ကက်သလစ်ရွာ (၇)ရွာထက် မနည်း တည်ထောင် နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ၂
ရွှေဘို ကျောင်းထိုင်နယ်အုပ် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ်ဟဲသည် ညောင်ချင်ပင်ရွာမှ ဆင်းရဲသားများအား အိုးအိမ် ထူထောင်ပေးသည်။ အိမ်ထောင်စု အလိုက် လှည်း နွား လယ်ယာ ကိုင်းကျွန်းများ ၀ယ်ပေးသည်။ တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးအတွက် ငွေများ မတည်ပေးသည်။ ဖါသာရ်ဟဲသည် ရွှေဘို ကက်သလစ် သာသနာနယ်အုပ် ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်၍ ဖါသာရ်တောဘိယ နှင့် ဖါသာရ် ရေမန်းဒက်တို့သည် လက်ထောက်ဘုန်းကြီးများ ဖြစ်ကြသည်။ ယင်း ဘုန်းတော်ကြီးတို့သည် ညောင်ချင်ပင်၊ တပူကုန်း၊ မဖေး၊ လက်ပံကြီး၊ ထနောင်းဝင်း၊ မေဂွန်၊ တဲကြီး၊ ကျည်းဖျား၊ ကန်ကြီးတော၊ ၀က်လက်၊ ကိုးတောင်ဘို့၊ ကန်ဘလူ၊ ကောလင်း၊ ချပ်သင်း၊ ၀င်းသို၊ စသော မြို့ရွာများရှိ ဘာသာဝင်များကို လှည့်လည် ကြည့်ရူရသည်။ ဖါသာရ်ဟဲသည် မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်၊ ကသာ၊ ထီးချိုင့်၊ ရွှေလီ မြစ်ဝှမ်း တလျှောက် လှည့်လည် ကြည့်ရူ ဟောပြောသည်။ ရွှေဘိုနယ်မှ ဘုန်းတော်ကြီးများသည် ဘာသာဝင်ရွာ အများအပြားကို လှည့်လည် ကြည့်ရူကြရသဖြင့် မည်သည်ရွာကိုမျှ အတည်တကျ နေထိုင်ခြင်း မရှိကြပါ။ ရဟန်း ဘုန်းတော်ကြီး မရှိသော အချိန်တွင် ဓမ္မဆရာများက ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူ ရသည်။ ၃ ဖါသာရ်ဟဲသည် (၁၉၂၉)ခုနှစ်တွင် ရွှေဘိုနယ်မှ ဗန်းမော်နယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည်။ သူ၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် (၅)နှစ် အတွင်း လူပေါင်း (၁၀၀၀)ကျော် ဘာသာသွင်း နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၄-ခုတွင် နှလုံးရောဂါကြောင့် မန္တလေး ပြန်လာ ခဲ့သည်။ မကြာမီ မေမြို့၌ ပျံတော်မူသည်။ ၄
၂။ The Voice, March, 1925,PP.75-76
၃။ ဆရာဂျိုးဇက် (ရွာတော်)၏ မှတ်တမ်း
၄။ Bishop Usher, The History of the Catholic Church in Burma
ဖါသာရ်လေဂျမ်း ဒရယ် (၁၈၆၃-၁၈၉၅)
Fr. L Legendre (Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ် လူဝစ် လေဂျမ်းဒရယ်သည် (၁၈၆၃)ခု စက်တင်ဘာလ (၂၂)ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၈၈၈) ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ မုံလှ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူခဲ့သည်။ (၁၈၉၅) စက်တင်ဘာလ (၄)ရက်နေ့တွင် မိတ္ထီလာ၌ ကာလ၀မ်းရောဂါဖြင့် ပျံတော်မူသည်။ သက်တော်(၃၂) သာ ရှိသေးသည်။ ၁
ဖါသာရ် ဖူးလ်ကီးယားသည် (၁၈၆၆) ခု နိုဝင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်
(၁၈၈၉) တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၁
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 4:41 AM
ဆရာတော်ကြီး ချေရီတီနှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသော တူရင်မြို့ သြဘလိပ်အသင်းဝင် ဦးပဉ္စင်းကြီး ယာကုတ် ပိုဂိုလိုတီအား ဆရာတော်ကြီး ချေရီတီက (၁၈၄၃) ခု၌ အမရပူရမြို့ စိန်ပီတာဘုရားကျောင်းတွင် ရဟန်းသိက္ခာ တင်ပေးခဲ့သည် ဖါသာရ်ပိုဂိုလိုတီသည် သာသနာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် စိတ်အား ထက်သန်သူ ဖြစ်သည်။ အချိန်တိုအတွင်း မုံလ၊ှ ချောင်းဦး၊ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူ ခဲ့သည်။ ချင်းတောင်တန်း သာသနာပြုရန် လမ်းစ ဖွင့်ပြီး ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း အခက်အခဲများစွာ ရှိ၍ မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ရခိုင်တွင် အခြေတည်ရန် စူးစမ်း ရှာဖွေရေး ခရီးထွက်စဉ် နာမကျန်းဖြစ်လာ၍ တပည့်များက ပုသိမ်သို့ ခေါ်သွားကြသည်။ ပုသိမ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီး ဂါဘူတီ၏ လက်ထောက် ဖါသာရ်တာရိုလီထံမှ နောက်ဆုံး စက္ကရမင်တူးများ ခံယူပြီး(၁၈၅၀) ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ (၅)ရက်နေ့တွင် ပျံတော်မူသည်။ ၁
၁။ The Voice, March,1926,PP.72-77
ဖါသာရ် ဗင်းဆင်း ဂါဘူတီ
Fr. Vincent Gabutti (Oblates)
ဆရာတော်ကြီး ချေရီတီနှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သော တူရင်မြို့ သြဘလိပ်အသင်းဝင် ဘရာသာရ် ဗင်းဆင်း ဂါဘူတီသည် (၁၈၄၃) ခုတွင် အမရပူရ စိန်ပီတာဘုရားကျောင်း၌ ဦးပဉ္စင်းကြီး ပိုလို ဂိုတီနှင့် အတူ ဆရာတော်ကြီး ချေရီတီထံမှ ရဟန်း သိက္ခာခံယူခဲ့သည်။ ဖါသာရ် ဂါဘူတီသည် သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွင် စိတ်အား ထက်သန်သူ ဖြစ်သည်။ အင်းဝ၊ နဘက်၊ ချောင်းဦး ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူ ခဲ့ရသည်။ မကျန်းမာသဖြင့် အီတလီသို့ ပြန်ကြွ ခဲ့ရသည်။ (၁၈၆၂) ခုနှစ်တွင် တူရင်မြို့၌ ပျံတော်မူသည်။ ၁
သြဘလိပ် အသင်းဝင် ဖါသာရ် ပါချီအိုတီသည် ဆရာတော်ကြီး ချေရီတီနှင့် အတူ (၁၈၄၃)ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၁ ဖါသာရ် ဂါဘူတီ နောက် နဘက်နှင့် ချောင်းဦး (၂)နေရာကို ကြည့်ရသည်။ (၂)နှစ် (၃) နှစ်ခန့် ကြာသောအခါ မကျန်းမာသဖြင့် ရန်ကုန်သို့ ပြောင်းရွှေ့သွားပြီး နောက် သရက်မြို့ကို သွားရောက်၍ သာသနာ အမှုတော်ကို ထမ်းသည်။ (၁၈၅၇)တွင် ကျမ်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် အနားယူခဲ့သည်။ ၂
၁။ Bigandet catholic Burmese Mission PP.33-35
၂။ The Voice, Sept,1926,PP.247-250
Fr. Dominic Tessio(Oblates)
ဖါသာရ် ဒေါမနစ် တက်စီအိုသည် (၁၈၄၃)ခုတွင် ကိုရင်အဖြစ်နှင့် သြဘလိပ်အသင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆရာတော်ကြီး ချေရီတီနှင့် အတူ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ပထမဆုံး မုံလှတွင် နေထိုင်ရသည်။ ကလေးများ ဘုရားစကား သင်ကြား ပေးရသည်။ (Gregorian)သီချင်းများ သင်ကြား ပေးခဲ့သည်။ မုံလှရွာတွင် (၁၈၅၂) ခုနှစ် အထိ နေခဲ့သည်။ ထို့နောက် ချောင်းရိုးတွင် ကိုရင်အဖြစ်နှင့် ဘုရားစကား သင်ကြား ပေးရသည်။ ထိုဒေသတွင် ရဟန်းဘုန်းတော်ကြီးများ တခါတရံသာ ရောက်ရှိသည်။ ဘရာသာရ် တက်စီအိုသည် သာသနာလုပ်ငန်းကို ကြိုးစား ပန်းစား လုပ်ကိုင်သည်ကို ဆရာတော်ကြီး ဘီဂန်းဒက် ကျေနပ်လှသဖြင့် ၁ (၁၈၆၁) အောက်တိုဘာလ နဘက် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း အသစ် ကောင်းကြီးပေး သာဓုခေါ်ပြီး မကြာမီ ရဟန်းသိက္ခာ တင်ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ချောင်းဦး ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှု့ ရသည်။ ၂
(၁၈၆၈) ခု ဇန္န၀ါရီလတွင် ဖါသာရ် တက်စိအို ရင်အောင့် လာသဖြင့် မန္တလေးသို့ သွားသည်။ ထိုနှစ် ဇန္န္န၀ါရီလ (၁၂)ရက် နံနက် မစ္ဆားပူဇော်အပြီး မကျန်းမာသော ကလေးများကို သွားရောက် ကြည့်ရှု့ပြီးနောက် နံနက် (၁၀) နာရီတွင် အပြင်းအထန် ရင်အောင့် လာသည် အင်္ဂလိပ် ဆရာဝန်ကို ခေါ်၍ ကုသပါသော်လည်း သက်သာမှု့ မရခဲ့ပေ။ ဖါသာရ် အဘိုနာက နောက်ဆုံး စက္ကရမင်တူးများ ပေးပြီးနောက် ပျံတော်မူသည်။ ၃
၁။ The Voice, Sept,1926,PP.247-250
၂။ Bigandet catholic Burmese Mission.P.36
၃။ The Voice, Sept, 1926, PP, 27-250
ဖါသာရ် ချားလ်စ်ဖေလိစ် ပရိနို အီဆိုလာ
Fr. Charies Felix Pregno D'lsola (Oblates)
ဖါသာရ် အီဆိုလာသည် (၁၈၄၅)တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ မော်လမြိုင်တွင် ဆရာတော်ကြီး ဗားလ်မားထံ နေထိုင်ပြီး သီအိုလိုဂျီ ပညာသင်ကြားရန် အင်္ဂလိပ်စကား လေ့လာခဲ့သည်။ မြန်မာစကား သင်ကြားရန် အမရပူရမြို့ရှိ ဖါသာရ် အဘိုနာထံ စေလွှတ်ခြင်း ခံရသည်။ ဖါသာရ် အဘိုနာက နဘက်နှင့် ချောင်းဦး ကြည့်ရှု့သော ဖါသာရ် ပါချီအိုတီထံ သွားရောက်၍ ဗမာစကား သင်ကြား စေခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူမည့် အချိန် ဆရာတော်ကြီး မရှိသဖြင့် ကာလကတ္တားသို့ သွားရောက်၍ ဆရာတော်ကြီး ကာရှုးထံ (Carew) မှ ရဟန်း သိက္ခာခံယူခဲ့သည်။ ၁
(၁၈၅၂) ခုနှစ် အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ဒုတိယစစ်အချိန်၌ ဘုရင်၏ သင်္ကာ မကင်းမှု့ကြောင့် ဖါသာရ်အီဆိုလာသည် ဖါသာရ် ဖေါနယ်လီ၊ ချောင်းဦးသား ဖါသာရ် မိုးဇက်ငဦးတို့နှင့် အတူ ဖမ်း၍ သံခြေကျင်းများ ခတ်ကာ နေပြည်တော် အမရပူရသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ခံရသည်။ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း အမျိုးမျိုးကို ခံကြရသည်။ နှိပ်စက်မှု့ဒဏ်မှ လွတ်မြောက်လာပြီး မကြာမီ မိုးဇက်ငဦး အမရပူရ၌ ပျံလွန်တော်မူသည်။ ဖါသာရ် ဖေါ်နယ်လီမှာ စိတ်ဖေါက် ပြန်သွားသည်။ ဖါသာရ် အီဆိုလာမှာ မော်လမြိုင်သို့ သွား၍ (၂) နှစ်လောက် နေပြီး ပြန်လာကာ မုံလှရွာ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှု့ရသည်။ ၂
ဖါသာရ် အီဆိုလာသည် မန္တလေးသို့ ၀တ်စောင့် သွားရင်း (၁၈၈၂) ခု နိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ဟံလင်းကြီး၌ ပျံလွန် တော်မူသည်။ အလောင်းကို(၆) လကြာမှ တူးဖေါ်၍ မုံလှသို့ ယူလာသည်။ ဒေါင်ဇီဇော်လာ (သို့) ဒေါင်ပါလိပ်ချယ်ဟူ၍ လည်း ခေါ်သည်။ ၃
၁။ The Voice, Sept,1926.PP247-250
၂။ Bigandet,catholic Burmese Mission, P-39
၃။ ခင်ထွေးရီ၊ အထက် မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန် သာသနာပြု သမိုင်း (၁၈၈၁၊ ၉၁၈) မဟာဝိဇ္ဇာ သမိုင်းဘွဲ့ အတွက်၊ မန္တလေး ၀ိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ် သမိုင်းဌာနသို့ ၁၉၆၉ တွင် တင်သွင်းသည့် ကျမ်း (နောင်တွင် ခင်ထွေးရီ၊ ခရစ်ယာန် သမိုင်းဟု အတိုဖေါ်ပြမည်)
သြဘလိပ်အသင်းမှ ဖါသာရ် ဖေါ်နယ်လီသည် (၁၈၄၈) ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာပြီး မကြာမီမှာပင် ချောင်းဦး ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူ ရသည်။ (၁၈၅၂) ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ဒုတိယ စစ်ဖြစ်ပွားရာ ဥရောပနိုင်ငံသား ဘုန်းတော်ကြီးများအား သံခြေကျင်းခတ်၍ နေပြည်တော်သို့ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ကြသဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဖေါ်နယ်လီ စိတ်ဖေါက် ပြန်သွားပြီး (၁၈၅၃) ခုနှစ်ဦးပိုင်းတွင် ပျံတော်မူသည်။ ၁
၁။ Bigandet, Catholic Burmese Mission P-39
(Fr.Moses Nga U)
မိုးဇက်ငဦးသည် ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၈၂၇)တွင် ချောင်းဦးမြို့၌ မွေးဖွား ခဲ့သည်။ ဆရာတော်ကြီး ကာအိုသည် ဥာဏ်ပညာ ထက်မြက်၍ အကျင့် စာရိတ္တ ကောင်းမွန်သော မိုးဇက်ငဦးအား (၁၈၄၀) ပြည့်နှစ်တွင် ဆရာတော်ကြီး ကိုယ်တိုင် အီတလီနိုင်ငံ၏ မြို့တော် ရောမမြို့သို့ ခေါ်သွားပြီး ပရော်ပါဂန်းဒါး တက္ကသိုလ်တွင် ပညာ သင်စေသည်။ ထိုအချိန်တွင် မိုးဇက်ငဦးသည် (၁၃)နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ မိုးဇက်ငဦးသည် မြန်မာ လူမျိုးထဲမှ ပရော်ဂါဂန်းဒါး တက္ကသိုလ်တွင် ပထမဆုံး တက်ခွင့်ရသူ ဖြစ်သည်။ ပရော်ဖါဂန်းဒါး တက္ကသိုလ်တွင် (၁၂) နှစ်ကြာ သင်ကြား လေ့လာခဲ့သည်။ ၁
ပညာ သင်ကြားပြီးနောက် (၁၈၅၂) ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်ရှိလာပြီး အမရပူရမြို့မှ ချောင်းဦးမြို့ရှိ ဆွေမျိုးများနှင့်တွေ့ရန် သွားခဲ့သည်။ထိုအချိန်သည် အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ဒုတိယစစ် ဖြစ်လုဆဲဆဲ အချိန် ဖြစ်သည်။ ချောင်းဦးတွင် လအနည်းငယ် နေထိုင်သည်။ ထိုအချိန်တွင် မြန်မာ အစိုးရက သင်္ကာမကင်းဖြစ် သဖြင့် တိတ်တဆိတ် တမန်များ စေလွှတ်၍ ရဟန်း ဘုန်းတော်ကြီးများကို ဖမ်းဆီး စေခဲ့သည်။ မိုးဇက်ငဦးမှာ နိုင်ငံသား ဖြစ်သော်လည်း ဖါသာရ် အီဆိုလာတို့နှင့် အတူ သံခြေကျင်း ခတ်၍ နေပြည်တော်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ နှိပ်စက် ညှင်းပန်းခြင်း ခံရသည်။မိုးဇက် ငဦးမှာ နှိပ်စက်မှု ဒဏ်ကြောင့် လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး သုံးလေးရက် အကြာတွင် အမရပူရ၌ ပျံတော်မူသည်။ သူ ပျံတော်မူချိန် သက်တော် (၂၅)နှစ် ရှိသည်။ ၂
ဖါသာရ် မိုးဇက်ဦးမောင်ဦး၏ အမရပူရ သင်္ချိုင်းဂူပေါ်၌ ရေး ကမ္ဗည်းကျောက်စာ
ဗြဟာနိုင်ငံတွင် ချောင်းရိုးရွာက ဘုန်းတော်ကြီး ဒေါင်မိုးဇယ်သည် အတတ်ပညာများကို သင်္ဘောဖြင့် ရောမမြို့၌ (၁၃)နှစ် နေတော်မူလျက် ရဟန်း သိက္ခာ တင်ပြီးမှ သာသနာတော်၏ အစီးအပွါးအလိုငှါ ဗြဟာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာတော်မူ၍ (၃)နှစ် ကျော်ခန့် သာသနာပြုစုပြီးမှ သေခြင်း မေတရားနှင့် မကင်းလွှတ်နိုင်၍ ကုလား သက္ကရာဇ် (၁၈၅၂)ခုနှစ်တွင် ပြန်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ရသည်။ ဘုရင်ဂျီ အမျိုးသားတို့ ကိုးကွယ်သည့် ဒေါင်မိုးဇယ်၏ တပြည့်-
အထက်ဖေါ်ပြပါ ဘုန်းတော်ကြီး၏ အရိုးများနှင့် သင်္ချိုင်းဂူ ပေါ်တင်ထားသော ကမ္ဗည်းကျောက်စာကို အမရပူရမှ တူးဖေါ်ပြီး အရိုးများကို မန္တလေးမြို့ ဖါသာရ်လဖုန်းကျောင်း ဘုရားစင်၏ လက်က်ျာဘက်၌ မြှပ်နှံထားသည်။ဤ ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် ညှင်းဆဲခံရသော ဣတာလျံ အမျိုးသားဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဖေါ်နယလီ၏ အရိုးများကို ဘုရားစင်၏ လက်ဝဲဘက်အောက်၌ မြှပ်နှံထားသည်။ ၃
၁။ (က) နန်မော်နီကား၊ မျိုးကြဲသူ၊ ၁၉၉၅ ၊နိုဝင်ဘာလ၊ စာမျက်နှာ-၁၅
(ခ) ဆရာချိုနဘက်၏ မှတ်တမ်း
၂။ (က) Vivian Ba, April, 1963, PP.19-20
(ခ)Bigandet,catholic Burmese Mission,P.39
ဖါသာရ် အာလောရှက် ပါရိုတို
Fr. Aloysius Parotto (Oblates)
သြဘလိပ် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် အာလောရှက် ပါရုတုိုသည် (၁၈၅၅) ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နဘက်ရွာတွင် နေထိုင်စဉ် မျက်စေ့ ဒဏ်ရာရသည်။(၂) နှစ်လောက် အကြာတွင် အီတလီသို့ ပြန်ကြွသွားသည်။ ၁
၁။ Bigandet,catholic Burmese Mission,P.38
ဘီရှော့ ဘီဂန်းဒက် (၁၈၁၃-၁၈၉၄)
ဘုရင်ဂျီ ဂိုဏ်းအုပ် ဘုန်းတော်ကြီး ပေါလ်အန်ဗရိုစ် ဘီဂန်းဒက်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘုရင်ဂျီဂိုဏ်း အယူဝါဒကို ပျံ့ပွားအောင် နှစ်ပေါင်း (၅၀)ကျော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ဖြစ်သည်။ ဘီဂန်းဒက်သည် အယူဝါဒရေးရာ၌သာ ခေါင်းဆောင်မှူ ပေးနိုင်သည် မဟုတ် ပညာရေးနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းများ၌လည်း ရှေ့ဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ဖြစ်သည်။ အောက်မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပထမဆုံးသော ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ ကိုယ်စားလှယ်တော် ဂိုဏ်းအုပ် ဘုန်းတော်ကြီး အဖြစ် (၁၈၅၆)ခုနှစ် မှ (၁၈၉၄) ခုနှစ် အထ်ိ အနှစ် (၅၀) နီးနီး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁
ပေါလ်အန်ဘရိုစ် ဘီဂန်းဒက်ကို (၁၈၁၃) ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၃) ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ဖရန့် ကွန်တေးနယ် မလန်းမြို့တွင် အယူဝါဒရေး၌ အလွန် လေးစားသော မျိုးကြီး မိဖများမှ ဖွားမြင်သည်။ ဘီဂန်းဒက်သည် ငယ်ရွယ်စဉ်က ပညာဥာဏ် ထက်မျက်၍ ထကြွ လုံးလ ၀ီရိယရှိသောသူ ဖြစ်သည်။ မိဖများကလည်း ချမ်းသာသူ ဖြစ်သည့်အလျှောက် လောကီ စည်းစိမ်ကိုသာ တတ်မက်မော၍ သာသနာပြုလုပ်ငန်းသို့ မပါဝင် ပါက ဘီဂန်းဒက်အဘို့ မတောင့်မတ မကြောင့်မကြ နေရမည်မှာ အမှန် ဖြစ်ချေသည်။ သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရား သခင်၏ အမှုတော်ကို ထမ်းဆောင်ရန် ဘုရားသခင်အား မိမိကိုယ်ကို လှူဒါန်းထားသူ ဘီဂန်းဒက်သည် (၁၆) နှစ် အရွယ်မှပင် စတင်၍ ဗြဟဒေ၀ဗေဒကို လေ့လာ သင်ယူရာ အယူဝါဒရေး၌ ထူးချွန်စွာ သက်ဝင် လေးစားသူ အဖြစ် ထင်ရှားသည် အသက် (၁၉)နှစ် အရွယ်တွင် မာနေးမြို့ သာသနာရေး ကောလိပ်တွင် ပါမောက္ခအဖြစ် ခန်းအပ်ခြင်း ခံရသည်။ ၂
(၁၈၃၆) ခုနှစ်တွင် ဘီဂန်းဒက်သည် ပါမောက္ခ ရာထူးမှ ထွက်၍ ခရစ်ယာန် ရဟန်းဘောင်သို့ ၀င်ကာ ပါရီမြို့ နိုင်ငံခြား သာသနာပြုအသင်းတွင် ပါဝင် ထမ်းရွက်သည်။ ထိုနောက် နိုင်ငံခြား သာသနာပြုအဖွဲ့၏ စေလွှတ်ချက် အရ မလ္လာယုကျွန်းဆွယ်သို့ သာသနာပြုရန် သွားရောက်ရသည်။ ပါရီမြို့မှ ထွက်၍ ရက်ပေါင်း(၁၃၀) ကြာမှ ပီနံမြို့သို့ ရောက်ရှိသည်။ မာလ္လာယု ကျွန်းဆွယ် သာသနာပြုဌာန အတွက် သတ်မှတ်ထားသော နယ်မြေတွင် အပါအ၀င်ဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ မြို့တစ်မြို့သို့ ဘီဂန်းဒက်သည် ဦးစွာ သွားရောက်ရသည်။ မြိတ်မြို့တွင် သာသနာပြု လုပ်ငန်းများကို လုံးလကြီးစွာ ဆောင်ရွက်ရင်း အားလပ်သည့် အချိန်တွင် မြန်မာဘာသာနှင့် စကားကို လေ့လာ သင်ယူသည်။ နောက် (၂) နှစ်ခန့် ကြာသောအခါ ထာဝရဘုရားသခင်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာအုပ် (၂) အုပ်ကို မြန်မာဘာသာနှင့် ပြုစုပြီး လေသည်။ မြိတ်မြို့တွင် နေစဉ် ဘီဂန်းဒက်သည် ကျောင်းများ တည်ထောင်၍ ကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ် စာပေသင်ကြား ပေးသည်။ မြိတ်မြို့တွင် (၆) နှစ်ခန့် ထမ်းရွက်ပြီးနောက် ပီနံမြို့မှ ဂိုဏ်းအုပ်ကြီး ဗူရှေးက ပြန်ခေါ် ခန့်ထားချက်အရ ပီနံဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို တာဝန်ခံ အုပ်ချုပ်ကာ မလ္လာယု ကျွန်းဆွယ်တခုလုံး၏ ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ်စားလှယ်တော်ချုပ်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရသည်။ မလ္လာယုကျွန်းဆွယ်တွင် နေထိုင်စဉ် အတွင်းလည်း သာသနာ ၀န်ထမ်းလုပ်ငန်းသာ မဟုတ် ပညာရေး လုပ်ငန်းများကိုပါ ဆောင်ရွက်သည်။ မရှိ နွမ်းပါးသော ကလေးများကို စာပေ သင်ကြားပေးခြင်း၊ မလေးဘာသာကို သင်ယူပြီး နောက် ရောမ အက္ခရာများဖြင့် တည်ထွင် ရေးသား၍ စာအုပ်များ ပြုစုခြင်း၊ သတင်းစာ မဂ္ဂဇင်းများသို့ ဆောင်းပါး ရေးသား ပေးပို့ခြင်း၊ စာအုပ်ပေါင်း များစွာကို မလေးဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်သည်။ ၃
(၁၈၄၆) ခုနှစ်တွင် စင်္ကာပူ ဂိုဏ်းအုပ်ကြီးက တွဲဘက် ဂိုဏ်းအုပ်တစ်ပါး ပို့ပေးရန် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးထံ လျောက်ထားသော အခါ၊ ဘီဂန်းဒက်အား ရဟန်းမင်းကြီးက ရွှေးချယ် ခန့်ထား လိုက်သည်။ သို့ရာတွင် ဤမျှ ကြီးကျယ်သော ရာထူးကို လက်မခံလိုကြောင်း လျှောက်ထား ငြင်းပယ်ကာ သာမန် ဘုန်းကြီးအဖြစ် (၁၀) နှစ်ခန့် ဆက်လက် နေထိုင် ထမ်းရွက်ခဲ့သည်။ (၁၈၅၆) ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာပြုရန် ပါရီမြို့ သာသနာပြုအဖွဲ့ လက်တွင် ကျရောက်လာရာ ဘုန်းတော်ကြီး ဘီဂန်းဒက်အား မလ္လာယု ကျွန်းဆွယ်လုံးဆိုင်ရာ တွဲဘက်ဂိုဏ်းအုပ်နှင့် အင်းဝနှင့် ပဲခူးနေပြည်တော်ဆိုင်ရာ ရဟန်းမင်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်ထားကာ မြန်မာနိုင်ငံကို သာသနာပြုရန် စေလွှတ် ခဲ့သည်။ (၁၈၅၆) ခု မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ရာမာသာဂိုဏ်းအုပ် ဘုန်းတော်ကြီးဟူသော ဘွဲ့ကို အပ်နှင်းခံရပြီးနောက် ထိုနှစ် ဧပြီလ (၁၄)ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘုရင်ဂျီဂိုဏ်းကို ပြန်လည် စည်းရုံးရန် မော်လမြိုင်မြို့သို့ ဆိုက်ရောက် လာသည်။ မော်လမြိုင်မြို့သို့ ရောက်၍ (၂၅) ခန့် နေပြီးနောက် ဂိုဏ်းအုပ်ကြီး ဘီဂန်းဒက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြား လှည့်လည်၍ သာသနာပြုရန် ရန်ကုန်ကို ဦးစွာ သွားရောက် လေသည်။
ထို့နောက် ပုသိမ်၊ မြောင်းမြ၊ သရက်၊ အမရပူရမြို့များသို့ လှည့်လည်သည်။ အမရပူရ မြို့တော်တွင် မင်းတုန်းမင်းကြီးအား ၀င်ရောက် တွေ့ဆုံကာ သာသနာရေး ကိစ္စများကို နှီးနှောခဲ့သည်။ ဘုရင်မင်းမြတ်က ဘီဂန်းဒက်အား ဆင်သုံးစီးနှင့် လှေတစင်း သနားတော်မူရာ ယင်းသည့် လှေနှင့် ဆင်တို့ဖြင့် ဘုရင်ဂျီ ဂိုဏ်းဝင်များ နေထိုင်ရာ ရွှေဘိုခရိုင်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ လှည့်လည် သွားလာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဗန်းမော်၊ တောင်ငူ၊ ရွှေကျင်၊ စစ်တောင်း၊ ပဲခူးမြို့များသို့ ၀င်သည်။ ထိုအချိန်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘုရင်ဂျီ ဂိုဏ်းဝင် (၄၀၀၀) ကျော်ခန့် ရှိသည်။ ၄
ဂိုဏ်းအုပ်ကြီး ဘီဂန်းဒက်သည် မြန်မာစကားကို ကောင်းစွာ တတ်သည့် အလျောက် ရောက်ရာ အရပ်၌ မြန်မာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများသို့ ၀င်ကာ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒကို လေ့လာခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်သည်။ ရပ်ရွာထဲ၌လည်း လှည့်ကာ ဗုဒ္ဓ၀ါဒီတို့၏ အယူဝါဒရေးဆိုင်ရာ စိတ်နေ သဘောထားကို လေ့လာသည်။ ယင်းသို့ လေ့လာပြီးနောက် (၁၈၅၈) ခုနှစ်တွင် ဗုဒ္ဓဂေါတမအကြောင်း စာအုပ်တစ်အုပ် ရေးသား ထုတ်ဝေသည်။ အောက် မြန်မာနိုင်ငံကို (၁၈၅၂)ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ဘီဂန်းဒက်၏ ဆောင်ရွက်မှုများကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ကျေနပ်လှသဖြင့် ဘီဂန်းဒက်အား ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရန် မြေနေရာများ ပေးသည်။ ယင်းသို့ဖြင့် ဘုရင်ဂျီ ဂိုဏ်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ များပြားလာခဲ့သည် (၁၈၅၈)ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ဘားလမ်း ထောင့်ရှိ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို တည်၍ (၁၈၅၉) ခုတွင် မော်လမြိုင်မြို့၌ စ်ိန်ပက်ထရစ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တည်သည်။ ထိုနောက် ဘီဂန်းဒက်၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်ဖြင့် ဒီလာဆာ ဂိုဏ်းဝင် ဘုန်းကြီးများသည် (၁၈၆၀) ပြည့်နှစ် ဧပြီလတွင် မော်လမြိုင်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာကြကာ စိန်ပက်ထရစ်ကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ကြသည်။(၁၈၆၀) ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်၍ နောင်အခါ စိန်ပေါလ်ကျောင်းဟု တွင်သည်။ (၁၈၉၇) ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ စိန်ပီတာကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်သည်။ ဂိုဏ်းအုပ်ကြီး ဘီဂန်းဒက်သည် အမျိုးသားများ အတွက်သာမက အမျိုးသမီးများအတွက်ပါ စာသင်ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ရန် ဂွတ်ရှက်ပတ် သီလရှင်ဂိုဏ်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဖိတ်ကြားရာ (၁၈၆၇) ခုနှစ်တွင် သီလရှင်များ ရန်ကုန်မြို့သို့ ဆိုက်ရောက် လာကြသည်။ ယခု ဗိုလ်ချုပ်လမ်းရှိ ကွန့်ဗင့်ကျောင်း၊ ပြည်လမ်းရှိ စိန်ဖီလိုမီနာ ကျောင်းခွဲတို့သည် ယင်းသီလရှင် ဆရာမများ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ကျောင်းကြီးများ ဖြစ်သည်။ နယ်များတွင် သီလရှင်များ ရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ သင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးရန် ယင်း သီလရှင်များက ကြီးမှူး၍ စ်ိန်ဖရန် စစ်ဇေးဗီးယား မြန်မာ သီလရှင်ဂိုဏ်း တစ်ခုကို တည်ထောင်သည်။ ၅
(၁၈၆၅) ခုနှစ်တွင် ဘီဂန်းဒက်သည် မြန်မာ ဘုရင်မင်းမြတ်ထံ အမိန့်ခံယူကာ ဗန်းမော်မြို့သို့ သွားသည်။ ယင်းမှ တဆင့် ကချင်တောင်တန်းနှင့် ယူနန်နယ်သို့သွား လမ်းများအကြောင်းကို လေ့လာ စုံစမ်းကာ တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းသို့ သာသနာပြုများ စေလွှတ်ရန် လမ်းခရီး ရှာဖွေသည်။ ကချင်ပြည်နယ်မှ ပြန်ရောက်သော အခါ ကချင်ပြည်နယ် အကြောင်း စာမျက်နှာ (၆၄) မျက်နှာခန့်ရှိ စာမူတခု ပြုစုခဲ့သည်။ (၁၈၈၇) ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် နေထိုင်ကြသော ဘုရင်ဂျီဂိုဏ်းဝင် အိန္ဒိယ အမျိုးသားများ အတွက် စိန်အန်ထော်နီ ဘုရားကျောင်း ဆောက်လုပ်ပေးသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဂိုဏ်းအုပ်ကြီး ဘီဂန်းဒက်၏ ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဘုရင်ဂျီ ဂိုဏ်းဝင်ပေါင်း (၁၈၀၀၀) တစ်သောင်း ရှစ်ထောင်ခန့် ရှိနေလေပြီ။ (၁၈၈၉)ခုနှစ် တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ လူအိုရုံ တစ်ခု တည်ထောင်၍ စေတနာ ၀န်ထမ်း အမျိုးသမီးနှစ်ဦးဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်သည်။ ထို့နောက်မှ ““လစ်တဲ စစ္စတာအောသပူးဝါး”” အမည်ရှိ သီလရှင်ဂိုဏ်းသို့ လွှဲအပ်ခဲ့ရာ ယခုတိုင် သိမ်ဖြူလမ်းတွင် လူအိုရုံ တည်ရှိနေသည်။ ယင်းသို့ သာသနာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးတို့ကို မနေမနား အားကြိုးမာန်တက် ထမ်းရွက်ခဲ့သော ဂိုဏ်းအုပ် ဘုန်းတော်ကြီး ဘီဂန်းဒက်သည် (၁၈၉၄) ခု မတ်လ (၁၉) ရက်နေ့တွင် အသက် (၈၁)နှစ် အရွယ်၌ အဆုတ်ရောင် အဖျားရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူသည်။ ၆
၁။ စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ (ဂ) ဒုတိယနှိပ်ခြင်း၊ ၁၉၇၉၊ စာမျက်နှာ-၂၇၈-၂၈၀
၂။ စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ (ဂ)၊ ဒုတိယနှိပ်ခြင်း၊ ၁၉၇၉၊ စာမျက်နှာ-၂၇၈-၂၈၀
၃။ စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ (ဂ)၊ ဒုတိယနှိပ်ခြင်း၊ ၁၉၇၉၊ စာမျက်နှာ-၂၇၈-၂၈၀
၄။ စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ (ဂ)။ ဒုတိယနှိပ်ခြင်း၊ ၁၉၇၉၊ စာမျက်နှာ-၂၇၈-၂၈၀
၅။ စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ (ဂ)။၊၁၉၇၉၊ ဒုတိယပုံနှိပ်ခြင်း၊ စာပေဗိမာန် ပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်၊ စာမျက်နှာ-၂၇၈-၂၈၀
၆။ စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ (ဂ)။ ၊၁၉၇၉၊ ဒုတိယပုံနှိပ်ခြင်း၊ စာပေဗိမာန် ပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်၊ စာမျက်နှာ-၂၇၈-၂၈၀
ဖါသာရ် သြဂုတ်စတင်း လေကောင်းသည် ဖါသာရ် အက်ဖ်ဂူးရင်း (Fr.F.Guren) ဖါသာရ် ဒူးမိုးလတ် (Fr.P. Dumollard) တို့နှင့် အတူ (၁၈၅၆) ခု အောက်တိုဘာလ တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ မှ မြန်မာနိုင်ငံ မော်လမြိုင်မြို့သို့ ......
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 5:54 AM
ဖါသာရ် ဂျိုးဇက် မောင်ကြီးသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ရေဦးမြို့နယ်၊ ချမ်းသာရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ရဟန်း ဘုန်းကြီးဖြစ်လိုသဖြင့် မုံလှတွင်၎င်း၊ နဘက်တွင်ိ၎င်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ရဟန်းဖြစ် သင်ကျောင်းများမှတဆင့် ရန်ကုန် စံဂျဲရ်မာနိုကော်လိပ်သို့ တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့သည်။ ဖါသာရ် စံဂျဲရ်မာနိုသည် သဒ္ဒါကျမ်း စာစီစာကုံးပညာ၊ သင်္ချာ ဘာသာ၊ ရေကြောင်း အတတ်နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သီအိုလိုဂျီနှင့် ဖီလိုဆိုဖီပညာရပ်များ သင်ကြား ပို့ချပေးခဲ့သည်။ (၁၇၉၃)ခုနှစ်တွင် ဆရာတော်ကြီး မန်တေးဂါးဇား လက်တော်မှ ရဟန်း သိက္ခာခံသည်။ ဖါသာရ် ဂျိုးဇက်မောင်ကြီးသည် မုံလှရွာတွင် သာသနာ အမှုတော်ကို ထမ်းဆောင်နေစဉ် (၁၈၁၀)ခုနှစ် တွင် မုံလှရွာ၌ ပျံလွန် တော်မူသည်။ ၁
၁။ (က) ကက်သလစ်ရာဇ၀င်၊ စာ-၃၃၃ (ခ) VivianBa, Feb, 1963, P.21 (ဂ) Fernandez, catholic churchin Burma, PP.10-11
Fr.Dominico Tarolli (Secular)
(၁၈၃၁) ခုနှစ်တွင် အီတလီမှ ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် ဒေါ်မီနီကိုတာရိုလီနှင့် ဂျိနိုဝါမှ စိန်သြဂတ်စတင်း အသင်းဝင် ဖါသာရ် အန်တိုနီ ရစ်ကားတို့သည် ဆရာတော်ကြီး ကာအိုနှင့် အတူ ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ဆရာတော်ကြီးမှာ ရန်ကုန်တွင် နေရစ်ပြီး ဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ပါးကို အင်းဝသို့ စေလွှတ်ခဲ့၏ ဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ပါးသည် ခရစ်ယာန် အနည်းငယ်နှင့် မုံလှတွင် ရှိသော ဖါသာရ် ဒါမာတိုကို သွားရောက် တွေ့ဆုံသည်။ ထို့နောက် ဖါသာရ် တာရိုလီက ချမ်းသာရွာသို့ သွား၍ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှူသည်။ ဖါသာရ် ရစ်ကားမှာ အင်းဝ၊ နဘက်၊ ချောင်းဦး ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူသည်။ ၁
ဖါသာရ် ဒေါ်မီနီကို တာရိုလီသည် ချမ်းသာရွာတွင် စိန်လောရင်း အမည်ရှိ လှပသော သစ်သားဘုရား ကျောင်းတစ်ဆောင်နှင့် ဘုန်းကြီးနေ ကျောင်းတစ်ဆောင် လုပ်ခဲ့သည်။ ဘုန်းကြီးနေ ကျောင်းအတွက် ဘာသာဝင်များက ကျပ်တစ်ထောင်ထက် မနည်း လှူဒါန်းကြသည်။ အဆိုပါ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ဘုရားကျောင်း တို့သည်(၁၈၄၂) ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် မီးလောင် ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ၂ ဖါသာရ် တာရိုလီသည် ဆရာတော်ကြီး ကာအို၏ လက်ထောက်အဖြစ် ပဲခူးကို ပြောင်းရွှေ့ ရသည်။(၁၈၃၃) ခုနှစ်တွင် ပုသိမ်၌ ပျံတော်မူသည်။ ၃
၁။ Vivian Ba, March, 1963, P.20
၂။ Ferdianand Andreino, Historical Record of the chief events connected with the Mission of AVA or nothern Burma. For the year 1830 to 1877, The voice, 1926.
၃။ The Voice, May, 1926, PP.126-131
Fr. Antonio Ricca (Augustinian)
ဘုန်းတော်ကြီး တာရိုလီနှင့် စိန်သြဂုတ်စတင်းဝင် ဘုန်းတော်ကြီး အန်တိုနီ ရစ်ကားတို့သည် ဆရာတော်ကြီး ကာအိုနှင့် အတူ (၁၈၃၁) တွင် ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ သူတို့ နှစ်ပါးကို အင်းဝသို့ ပို့လိုက်သည်။ သူတို့ နှစ်ပါးသည် မုံလှုသို့ သွားခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက် ဖါသာရ် ရစ်ကားမှာ အင်းဝသုိ့ သွားပြီး အင်းဝ၊ နဘက်၊ ချောင်းဦး၊ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူ ခဲ့သည်။ ၁ ဖါသာရ် ရစ်ကားသည် နဘက်တွင် (၂) နှစ် နေပြီး မကျန်းမာသဖြင့် အီတလီသို့ ပြန်ကြွသည်။ ၂
၁။ Vivan Ba ,March,1963,P.20
၂။ The voice, May,1926,PP.126-131
Fr. Nicolaus Polignani (Augustinian)
စိန်သြဂုတ်စတင်း အသင်းဝင် ဖါသာရ် နီကောလပ်စ် ပိုလီညာနီသည် (၁၈၃၂) ခုတွင် ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ ဖါသာရ် ပိုလီညာနီအား တရုတ်ပြည် ပီကင်းမြို့သို့ ရဟန်းမင်းကြီး၏ ကိုယ်စာလှယ် အဖြစ် အုပ်ချုပ်ရန် သာသနာပျံ့ပွါးရေး အသင်းက စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ် ပိုလီညာနီသည် ဥရောပ သာသနာပြုများ တရုတ် ဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးနှင့် အတူ မကာအိုသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည်မှ တဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။
(၁၈၃၂) ခုနှစ်မှာပင် ဖါသာရ် ပိုလီညာနီ ချမ်းသာရွာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဘာသာဝင်များကို အုပ်ချုပ်သည် ဖါသာရ် အာဘိုနာနှင့် ဖါသာရ် ဗာတစ်လီတို့ မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်း သာသနာကို ရောက်ရှိလာကြသော အခါ ဖါသာရ် ပိုလီညာနီက ချမ်းသာရွာ၊ မုံလှ နှင့် ချောင်းရိုး ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူ ရသည်။ ဖါသာရ် ဗာတစ်လီ နဘက်နှင့် ချောင်းဦး ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူရ၍ ဖါသာရ် အဘိုနာက မင်းနေပြည်တော် အမရပူရ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူရသည်။ ထိုအချိန်တွင် မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်း သာသနာ၌ ဘာသာဝင် ဦးရေတစ်ထောင်ခန့် ရှိသည်။ ၁
ချမ်းသာရွာ၌ ဖါသာရ် တာရိုလီသည် တည်ဆောက်ခဲ့သော စိန်လောရင်း ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ (၁၈၄၂)ခုနှစ် ဦးပိုင်းတွင် မီးလောင် ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားချိန်တွင် ဖါသာရ် ပိုလီညာနီမှာ မုံလှရွာသို့ သွားရောက်၍ ဘုရားကျောင်း ဆောက်လုပ်နေသဖြင့် ချမ်းသာရွာတွင် မရှိခဲ့ပေ။ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ ဘုန်းတော်ကြီးအား ဝေယျာဝစ္စ ဆောင်ရွက်ပေးနေသော ကလေး တစ်ယောက်သည် မီးအိမ်ထဲ ဆီထည့်ရာမှ ဆီပုံး မီးစွဲပြီး စတင် လောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။ မီးလောင်ချိန် လေပင့်တိုက် ခတ်မှုကြောင့် တကျောင်းလုံး တမုဟုတ်ခြင်း၊ ကူးစက် လောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပါ ချက်ချင်း ငြိမ်းသတ်ကြသော်လည်း တန်ဘိုး မရှိသော ပစ္စည်းတချို့နှင့် အမြင့် တတောင်ခန့်ရှိ ရွှေချထားသော မယ်တော် သခင်မ သစ်သားဆင်းတုတို့သာ မီးဘေးမှ လွတ်မြောက် ခဲ့ရသည်။ ရှေးလူကြီးများ ပြောဆိုချက်များအရ အဆိုပါ ဆင်းတုမှာ ကျွန်းတောရွာမှ ဘာသာဝင်များ တကွဲတပြား ထွက်ပြေးပြီးနောက် ယူဆောင်လာခဲ့သော ဆင်းတု ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဆင်းတုမှာ မြန်မာလူမျိုးတစ်ဦး၏ အသင့်အတင့် လက်ရာမြောက်စွာ ထုလုပ်ထားသော ဆင်းတု ဖြစ်ဟန်တူသည်။ မယ်တော်၏ လက်ဝဲ လက်မောင်းတွင် သူငယ်တော် ယေဇူးအား ပွေ့ပိုက်လျက် ရှိပြီး၊ လက်ျာ လက်ဘက်တွင် တစုံတရာ ကိုင်ထားသကဲ့သုိ့ တဘက် ပိတ်ထားထားသည်။ St.Mary of Rose ဘွဲ့နာမခံ (Oriental Ligaria) ၌ စိန်မာဂရက်အား အပ်နှံ ပူဇော်ထားသော တန်ခိုးကြီးသော ဆင်းတု၏ ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း လက်ျာဘက်တွင် နှင်းဆီပွင့်ကို ကိုင်ထားဟန် ရှိသည်။ ဖါသာရ် ပိုလီညာနီ ပြောလေ့ရှိသည်မှာ အဆိုပါ မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် လှပသော ဘုရားကျောင်းလေးနှင့် အတူ ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ သို့သော် သာသနာအတွက် သာ၍ ကြီးမားသော အစားပြန် မရနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှု တစ်ရပ်မှာ ရှေးဟောင်း သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ထားရှိခဲ့သော အရေးကြီးသည့် လက်ရေး စာမူ စာရွက်စာတမ်းများ မှတ်ရာများ မီးလောင်သွားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သာသနာနယ် တခွင်တွင် ဖါသာရ် ပိုလီညာနီ တစ်ပါးသာ ချမ်းသာရွာ၌ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့သည် ကတကြောင်း၊ ချမ်းသာရွာအနေဖြင့် စိတ်အချရဆုံး နေရာဒေသဟု ယူဆရသည်က တကြောင်း အဆိုပါ စာရွက် စာတန်းများ မှတ်တန်းများကို ချမ်းသာရွာ၌ ထိန်းသိမ်း ထားခဲ့သည်။ ချမ်းသာရွာ ဘာသာဝင်များ၏ (Register)စာအုပ်များနှင့် အတူ အခြား ရွာတော်ရွာများမှ ဘာသာဝင်များ၏ ဆေးကြောခြင်း မှတ်တမ်းများလည်း မီးလောင် ပျက်စီးသွားသည်။ မီးလောင်ကျွမ်းသည့် အချိ်န်တွင် ဆရာတော်ကြီး ချေတီရီ ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေသည့်အချိန် ဖြစ်သဖြင့် ချမ်းသာရွာ၌ ယာယီ ဘုရားကျောင်း ပြန်ဆောက်ရန် ဆရာတော်မှ ငွေကျပ် လေးးရာ ချက်ချင်း ပို့လိုက်သည်။ ဖါသာရ် ပိုလီညာနီမှာလည်း အမရပူရမှ ကုသိုလ်ရှင် တချို့ ရခဲ့သည်။ ချမ်းသာရွာ ဘာသာဝင်များ၏ စုစုပေါင်း အလှူငွေ တစ်ထောင်ကျပ်နှင့် သစ်သား ဘုရားကျောင်း ပြန်လည် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဆောက်လုပ်ရာ၌ ဘုရင့် နန်းတော်မှ ဆေးဆရာ သမားတော်ကြီး ဆရာမှုန် ဆိုသူက ငွေကျပ်သုံးရာ ထပ်မံ လှူဒါန်းပြီးး ၀တ်ပြု ကိုးကွယ်ချိန် ဘုရားကျောင်း အတွင်း နေရာ မရသူများအတွက် မတ်တတ် ရပ်နိုင်စေရန် ဆင်ဝင်ကြီး တခု တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၂
ချမ်းသာရွာ ဘုရားကျောင်း ကျောက်စာ (၁၈၄၃)
ခရစ် သက္ကရာဇ် (၁၈၄၃)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် လေးစားအပ်သော ယောဟန် ချေရီတီ၏ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးသည် ပထမကျောင်းကို ကောင်းချီး ပေးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဤသာသနာနယ်၌ ရှိသော (၁) ဘုန်းတော်ကြီး ဒေါင်ဒေါ်မနှစ်ကူး (၂) သံသြဂတ် စတင်း အသင်းဝင် ဘုန်းတော်ကြီး နီကောလာ ပိုလီညာနီ(၃) ဘယ်နယ်ဒီတင် အသင်း ဘုန်းတော်ကြီး ဒေါင်အီညာဆီအူး (၄) ကညာမာရီယား အသင်းဝင် ဘုန်းတော်ကြီး ဒေါင်ပေါလူး အာဖတ် (၅)ဘုန်းတော်ကြီး ဂါယေတာ နုစ်ဘောက်တို့ ကောင်းကြီးပေး အခန်းအနားတွင် ပါဝင်ကြသည်။ မစ္စက်လင်ဇီရိမှ လိုအပ်သည်များ လှူဒါန်းခဲ့သည်။
(၁၈၄၃) ခု အောက်တိုဘာလတွင် ဆရာတော်ကြီး ချေရီတီသည် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် အဘုနာ၊ ဘရာသာရ် တက်ဆီအို၊ ဘရာသာရ် အိုပါတီတို့နှင့် အတူ၊ အထက်အညာ ဘုရင်ဂျီ ရွာကြီးများရှိ ဘာသာဝင်များအား ကြည့်ရူရန် နယ်လှည့် ခရီး ထွက်ခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ နဘက် ချောင်းဦးမှ တဆင့် ရေဦးသို့ ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ရေဦးမြို့သည် ခရိုင်မြို့ ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်ကြီး ချေရီတီ ရေဦးသို့ ရောက်ရှိကြောင်း ချမ်းသာရွာက ဖါသာရ် ပိုလီညာနီ သတင်း ရရှိသည်။ ထိုအချိန်တွင် မိုးများရွာသွန်းနေသဖြင့် သွားရေး လာရေး ခက်ခဲသည်။ သို့သော်လည်း ဖါသာရ် ပိုလီညာနီနှင့် ဘာသာဝင်များက မြင်းများဖြင့် ရေဦးသို့ သွား၍ ဆရာတော်ကြီးအား ကြိုဆို ကြသည်။ ချမ်းသာရွာ အရောက်တွင် ခေါင်းလောင်းများ ထိုး၍ ၄င်း၊ မြန်မာ့ရိုးရာ အိုးစည် ဗုံမောင်း အက အခုန်များဖြင့် ၄င်း၊ ဘာသာဝင် ငါးရာခန့်က ကြိုဆို ဂါရ၀ပြု ကြသည်။ ဆရာတော်ကြီး ချမ်းသာရွာတွင် ရက်အနည်းငယ် နေထိုင်ပြီး နောက် ဖါသာရ် အဘိုနာတို့နှင့် အတူ ဘာသာဝင် (၁၂၅)ဦး ခန့်သော ချောင်းရိုးရွာသို့ သွားရောက် ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် မုံလှ ဘာသာဝင်များကို သွားရောက် ကြည့်ရူ ကြသည်။ မုံလှ မှ ရှိန်းမကားသို့ လှည်းဖြင့် (၃) ရက် ခရီး သွားခဲ့ရသည်။ ရှိန်းမကားမှ လှေစီး၍ အမရပူရ ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ၃
ဖါသာရ် ပိုလီညာနီသည် ချမ်းသာရွာ ဘာသာဝင်များကို အုပ်ချုပ်ရသည့် အပြင် ဆရာတော်ကြီး ဘီဂန်းဒက်၏ ဂိုဏ်းထောက်အဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရသည်။(၁၈၅၉) ခုတွင် ဆရာတော်ကြီး ဘီဂန်းဒက်၏ ဆင့်ခေါ်ချက်အရ မန္တလေးသို့ သွားရ ပြန်သည်။ အပြန်တွင် နဘက်ရွာမှ ဖြတ်၍ ပြန်သည်။ နဘက်ရွာတွင် ကာလ၀မ်းရောဂါ ဖြစ်သော အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို နောက်ဆုံး စက္ကရမင်တူးများ ပေးပြီးနောက် နံနက် စောစောတွင် ချောင်းဦးသို့ ထွက်ခွာခဲ့သည်။ လမ်းတွင် မမျှော်လင့်ဘဲ ဘေးထိုး ရင်ကျပ်ဖြစ်ပြီး သတိလစ် သွားခဲ့သည်။ ချောင်းဦး ရောက်ခါနီးတွင် ပျံတော်မူသည်။ ပျံတော်မူသည့်နေ့မှာ (၁၈၅၉) ခု ဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။ ချောင်းဦးတွင် သင်္ဂြိုလ်သည်။ ၄
၁။ The Voice, May,1926,PP.126-131
၂။ The Voice, August,1926,PP.220-224
၃။ (က) The Voice, July, 1926, PP.181-185 (ခ) The Voice, August, 1926, PP.220-224
၄။ The Voice,Sept,1926,PP.247-250
ဖါသာရ် ဂျိုးဇက် အင်ရီချီ (၁၇၉၁-၁၈၄၁)
Fr. Joseph Enrici (Oblates)
ဖါသာရ် ဂျိုးဇက် အင်ရီချီသည် (၁၈၃၉) ခုတွင် သြဘလိပ်အသင်းမှ ပထမဆုံး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသော ဘုန်းတော်ကြီး ဖြစ်သည်။ နဘက်နှင့် မုံလှတွင် (၂)နှစ် အမှုထမ်းပြီး မုံလှတွင် (၁၈၄၁)ခု သက်တော် (၅၀)တွင် ပျံတော်မူသည်။ ၁
၁။ (က) Vivian Ba, April,1963,P.19
( ခ ) The Voice,May,1926,PP.126-131
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 6:54 PM